सरकारमा बसेर रेल, पानीजहाजमात्र भन्ने, जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा हेर्नुपर्दैन? हावा कुरा गरेर मात्र हुन्छ? : सुशीला कार्की – BIG FM 101.2 MHz
Home » राष्ट्रिय » सरकारमा बसेर रेल, पानीजहाजमात्र भन्ने, जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा हेर्नुपर्दैन? हावा कुरा गरेर मात्र हुन्छ? : सुशीला कार्की
सरकारमा बसेर रेल, पानीजहाजमात्र भन्ने, जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा हेर्नुपर्दैन? हावा कुरा गरेर मात्र हुन्छ? : सुशीला कार्की
पहिलोपोष्ट डटकमबाट साभार